It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာပြည် အခြေအနေ ( ၃။ ၂၇။၂၀၀၈)
ညပိုင်း စားသောက်ဆိုင်၊ ကာရာအိုကေတွေကတော့ ပုံမှန်လောက်ပါဘဲ၊ သိပ်ပြီးတော့ ကျဲသွားတယ် တော့မဟုတ်ပါ။ လူတော့နည်းသွားပါ တယ်။
ညပိုင်းဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးတော လူသွားလူလာမရှိဘူး၊ ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ အားလုံးက အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်ကြတာ များတယ်။
ပူတာရယ်၊မီးကလည်း ပြတ်တော့အားလုံးက အိမ်မှာ ညဆိုရင် မအိပ်နိုင်ကြတယ်ရယ်။ ကိုယ်ဟာကို မီးကင်း စောင့်ရတယ် ဆိုတာပုံစံပေ့ါ။ နည်းနည်းတော့၊ ကြံဖွတ်တွေက ပြည်သူကို မျက်နှာချို သွေးတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်၊ သူတို့ က ပြည်သူထဲမှာနေရတော့ ကြောက်ဟန် နည်းနည်းပြတယ်..သတ္တိမရှိပါ။
မှတ်ပုံတင်တွေ ဟောင်းလား၊ ပျောက်လား ၊ ၅၀၀၀ ပေးရင် နေတွင်းချင်း ပြန်ပြီးတော့ အသစ်လုပ်ပေးတယ်၊သို့ ပေမဲ့ကြံဖွတ် တံဆိပ်လေးတော့တွဲပြီးပါလာမယ်။
ခလေးတွေက အခုထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်၊ သင်္ကြန်ကျရင်တော့ ပိုပြီး ပြဿနာတက်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့ လည်းဆို တော့ သင်္ကြန်ခွေတွေက ပြည်တွင်းမှာ တော်တော်ကြီး ကိုပျံ့ နေပြီ၊ ခလေးတွေက ကြံဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်တွေကို ရေရေ လှယ်လှယ် လှောင်နေပါတယ်။ ဒီကောင်တွေကို ပြည်သူတွေက တော်တော် တင်းနေတယ်။
အရေးပါသောစစ်တိုင်းမှုးနဲ့တပ်မမှုးတွေကိုနားလည်ပါးရိုက်လုပ်ပြီးတော့ နေပြည်တော်မှာ အကျယ်ချုပ် ခေါ်ထား တယ်။ အထူးသဖြင့် တပ်မ၉၉ ၊၆၆၊ ၂၂၊ ၃၃၊ ဖြစ်တယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ အနောက်မြောက်တိုင်း၊ အရှေ့ တောင်တိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း၊ တို့ ကစစ်ဗျုဟာမှုးတွေ ကောပါ တယ်။
နောက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေ၊၀န်ထမ်းတွေကိုငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်ကနေ ၃၀၀၀၀၀ထိကို အတိုးနည်းနည်းနဲ့နှစ်ရှည် ချေးဌားဖို့ လုပ်ဆောက်ထားတယ်၊ စပြီးတော့ ပညာရေး၊ စက်မှု့ ၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးက ၀န် ထမ်းတွေကို အရင်ဆုံး ရာထားတယ်၊ ပြည်ထဲရေး က ရဲ ၊ အကျဉ်းဦးစီးနဲ့ကိုတော့ အပေါ်ပိုင်း ရုံးအုပ် အဆင့် လောက်ကနေ စပြီးတော့ နေပြည်တော်မှာ မြေကွက်တွေကို လစဉ်ပေး ၃ နှစ် စီမံကိန်းနဲ့ ချပေးလိုက် တယ်။
ကုန်သည်ကြီးအသင်းကို ဆန်၊ ဆီ၊ကို အရေးပေါ်ရင် ပြန်ပြီးတော့ ပြည်သူကို ကြံဖွတ်ကနေ ပြန်ပြီးဖြန့် ဖို့ ညွန့် ကြားထား တယ်။
လောင်စာဆီကို တင်သွင်းနေတဲ့ ၊ မလေးရှား က မိုကုန် လိုခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ စီနို တိတ်ရဒင့်း ကုမ္ပဏီ၊ အေးရှား ဝေါကုမ္ပဏီက ကိုင်ထားတဲ့ ကမ်းရိုးတမ်း ကုမ္ပဏီ တွေကို ၄င်း၊ ထိုင်းမြန်မာ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ ( အရင်ထောက် လှမ်းရေး ဟောင်းတွေနဲ့ အီတလီထိုင်းကုမဏီ ပေါင်းစပ်ထားသော) ကိုတစ်လကို ၆၀၀၀၀ ကို မဖြစ်မနေ သူတို့ သွင်းခိုင်းသောဈေး နဲ့ သွင်းဖို့ လုပ်ခိုင်းတယ်လို့ သိရတယ်။CNG ကို လုံးဝအပြည့်အ၀၊အခြေအနေ မပေးနိုင် သော ရောင်းချခြင်း ကိုလုပ်ထားတယ်၊
အင်တာနက်တွေကိုနောက်နေ့တွေကစပြီးတော့ speed နှိမ့် ချပေးမယ် လို့သိရှိရပါတယ်၊၊
ညဖက်မူးနေတဲ့ကောင်တွေက ကြံဖွတ်ကိုကောင်းကောင်းပြောပြီး၊ လိုက်ပို့ခိုင်ရင်ရတာယ်၊ ဘာမှတောင် အမေး မြန်း မရှိဘူး၊ပိုက်ဆံတော့ပေးလိုက်ပေါ့၊ ပိုက်ဆံရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်၊ နေရာတကာ ငွေဘဲ။ တစ်ခုတော့ ရှောင်ပေါ့၊ ခံမပြောနဲ့၊ အစ်ကိုကြီး မှားသွားလို့နော် ဆိုတာမရှိဘူး၊ ကြံဖွတ်တွေ စွမ်းအားရှင်တွေ က တဖြေးဖြေး.များလာ..အာဏာရှိလာကြတယ်။
၈၈၈၈ ကျောင်းသားမျိူး မစစ် ( မျိုးချစ် မဟုတ်ပါ) အေးလွင်တို့ကို ဆို နအဖက ဘော်ဒီဂါတ်တွေကို ပေးထား ပါသည်။ အရပ်ဝတ်ရဲ တွေပေါ့၊ သူကကြံဖွတ်တွေကို၎င်း၊ စွမ်းအားရှင်တွေကို၎င်း လိူရာခေါ်သုံးလို့ ရတယ်၊ ကားဆီလည်း ကြိုက်သလောက် ထည့်သုံးပေါ့၊ အားလုံး ကတော့ နိူင်ငံတော့ ပြောင်းလဲမယ်..မပြောင်းလဲမယ် မသိ။ စားပြီး သူတို့ ဗိုက်ရွဲလာတာဘဲတွေ့ရတယ်ပြောတယ်၊ သူကို တော်တော်များအများက၀ိုင်းပြီးကျဉ် ထားပြီး၊ ကြံဖွတ်၊စွမ်းအားရှင်က နောက်ကလိုက်တော့ လူဘဲများနေသယောင်ယောင် ဟန်ချိုးထားပါသည်။
အတွင်းမှာ၊ ဘယ်သူမှာ လေးဂွနဲ့မဆွဲရဲဘူး၊ ကြံဖွတ်၊စွမ်းအားရှင်က လွဲလျှင် ပြည်သူ လေးဂွကိုင်လျှင်ပင်.. အပြစ်ကြီးပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေကို အတင်းအကျပ် ဆိုတာထက် ပိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကနေ တဆင့်၊ အခြေခံ ဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး၊ မြန်မာပြည် အခြေအနေ ( ၃။ ၂၇။၂၀၀၈)
ထောက်ခံဖို့ ကို အခွင့်အရေးများစွာ ပေးပြီးလုပ်ခိုင်းဖို့ ၊ ကျော်ဆန်းကနေ ရုပ်ရှင် ကောင်စီ ကို တာဝန်ပေးထားတယ်၊
အဆိုးဆုံးက ယခင်ကနံမည်ရှိသော၊ လူလေးစားသော ရုပ်ရှင်သမားတွေကို ဦးစားပေးစည်းရုံးဖို့ နဲ့ တချို့ကို တော်လှန်ရေးနေ့ ပွဲကိုနေ့ ကော၊ ညပါ တက်ခွင့်ကို စစ်တပ် ကုန်ကျစရိတ် နဲ့ ခေါ်ထားတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံး အဖားဆုံးမှာ အူဝဲ ဖြစ်ပြီင်္း ခင်သီတာထွန်းနှင့် သူ့ ယောက်ျား ပြုံးမောင်မောင်က ငွေ တော်တော်လေး ကို စိုက်ပြီး နအဖ ၏ ပွဲများ ဖြစ်မြောက်အောင် ဖား၍ လုပ်ပေး နေကြပါသည်.၊၊ တင်အောင်မြင့်ဦး။ ဇော်ဝမ်း၊ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ၏ သား၊ မိုဒယ်တွေ။ အဆိုတော်တွေ. ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မင်းသားတွေ မိန်းခလေးတွေကော၊ ယောက်ျားလေးတွေ ရော နေပြည်တော်ကို တော်လှန် ရေးနေ့အခန်းအနား သွားကြရပါသည်။
အဆိုတော်တွေကိုစည်းရုံးရေးက စိမ်းမို့မို့တို့L ခွန်းရီတို့ကို ခိုင်းတာ မရလို့ နောက်ပေါက်တွေကို မက်လုံးပေး ပြီး ဆိုခိုင်းနေကြောင်း သိရှိရပါသည်၊